राष्ट्र हाँक्ने जिम्मेवारी आए पछि हट्ने छैन: सिताराम कट्टेल'धुर्मुस' Darpansansar News
‘मेरी बास्सै’ टेलिश्रृखंलाबाट स्थापित भएका चर्चित हाँस्यकलाकार दम्पती सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) यतिबेला सामाजिक काममा सक्रिय छन् । विनाशकारी महाभूकम्पपछि यो जोडी कलाकारितासँगसँगै ‘नमूना एकीकृत बस्ती’ निर्माणबाट यतिबेला झनै चर्चामा छन् । काभ्रेको लोपोन्मुख पहरी एकीकृत बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौरमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरेर उनीहरुले देश तथा बिदेशबाट स्याबासी पाइरहेका छन् ।
हालै मात्र उनीहरुले महोत्तरी जिल्लाको मुसहर बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने सिंगो देशलाई बालमैत्री बनाउने अभियानका साथ बिभिन्न जिल्लाहरुमा आफूहरुले निर्माण गरेको चलचित्र ‘ज्योती’ प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी गोविन्द मरासिनीले कलाकार धुर्मुससँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्:
कलाकारिता छाडेर किन समाजसेवा तिर लाग्नुभएको ?
कलाकारिता पूरै छाडेको होइन,राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ अभियानहरुको सुरुवात गरेको हो । समाजसेवातिर लाग्नुमा केही स्वार्थ छ भने त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि मात्र हो अरु कुनै स्वार्थ छैन ।
राजनीतिमा सक्रिय हुने योजनामा हुनुहुन्छ रे, हो ?
त्यस्तो कुनै मनसायले कलाकारिता गरेको थिइन र त्यही मनसायले कलाकारिताबाट अगाडी बढेर समाजसेवातिर लागेको पनि हैन । अहिले जति पनि कामहरु गरिएका छन्, भोलिका दिनमा राजनीतिमा आउनका लागि भनेर गरिएका पनि होइनन् । देश काल परिस्थिति अनुसार देश दुखेका बेलामा सहयोगी बन्नुपर्छ भनेर नै अगाडी बढिएको हो ।
यद्यपी देशलाई कुशल नेतृत्वको खाँचो भने छ, देश बनाउने अभियन्ताको खाँचो छ । भोलिका दिनहरुमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले देश बनाउने अभियान र नेतृत्व लिनेमा योग्य, कुशल ब्यक्तिको छनोट गर्ने क्रममा हामीलाई त्यसको ‘अफर’ आयो भने गर्न नसक्ने चाहीं होइन । तर, तत्कालै कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर चुनाव लड्ने र राजनीतिमै आउने सोचाइमा यी काम गरिएका भने होइनन् ।
एकीकृत बस्ती निर्माण गरिसक्नुभयो । अब के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
अब तत्कालको योजना के छ ?
हाम्रो मात्र नभई समग्र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको एउटा सपना साकार गर्न देशलाई बालमैत्री कुनै पनि हालतमा बनाउनुपर्छ र त्यसका मुख्य अभियन्ता भएर हामी लागे पनि हाम्रो अभियानमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य योजना हो । यस बाहेक हामीले हालसालै तेस्रो एकीकृत बस्ती निर्माण पनि घोषणा गरेका छौं । जसअनुरुप हामीले महोत्तरी जिल्लाको मुसहर बस्ती बनाउने छौं ।
बस्ती निर्माण गरेबापत नाम त खुबै कमाउनु भयो, दाम चाहीं कत्तिको कमाइदोरहेछ ?
यो बस्ती निर्माण कुनै दाम कमाउनलाई गरिएको थिएन । कलाकारिताबाट नामसँगै केही दाम कमाएका थियौं । जुन दर्शकले दिएको उपहार दाम थियो, त्यसले हामीले एउटा घर बनाएका थियौं त्यो घरपनि भूकम्पपीडितका लागि सहयोग गर्नकै लागि बेच्यौ । यहाँहरुलाई थाहा नै छ, हामी अहिले सानो जग्गामा घर बनाएर बसेका छौं । हामीलाई ठूलो दाम कमाऔं, ऐस–आराम गरौं, पीडितका लागि राजनीति गरौं अथवा पीडितका नाममा उठेको पैसा दुरुपयोग गरौं, महल ठड्याऔं भन्ने अपराधी दिमाखले कहिल्यै पनि अगाडी बढेका होइनौं । र, बस्ती बनाईसकेपछि सबभन्दा ठूलो आशिर्वाद पायौं ।
तपाईकै सहकर्मी (दिपक/दिपा)ले चलचित्रबाट करोडौं कमाए । तपाईंलाई पछुतो लागेको छैन ?
हामीलाई त्यस्तो केही पनि पछुतो छैन । हामी जे गरिरहेका छौं त्यो देशको हितका निम्ती गरिरहेका छौं । हामी तत्कालै ब्यबसायिक हिसाबमा यसरी बढ्नुपथ्र्यो, यति कमाउनुपथ्र्यो भनेर हामी कहिल्यै पैसामुखी भएर अगाडी बढेका पनि हैनौं । झन हाम्रो आदरणीय दाइहरुले निर्माण गरेको र हामी पनि सहभागी भएको फिल्मले करोडौं कमाइरहँदा खुसी लागेको छ ।